Maxay tahay sababta uu ilaa hada Mesut Ozil heshiiska ugu saxiix la,yahay kooxdiisa Arsenal? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Maxay tahay sababta uu ilaa hada Mesut Ozil heshiiska ugu saxiix la,yahay kooxdiisa Arsenal?
(11-10-2017) Mesut Ozil ayaa lagu soo waramayaa inuu ku guuldareystay inuu soo jiito wax dalab ah oo ku aadan adeegiisa, waxaana laga yaabaa inuu Arsenal kusoo soo xerogeliso qandaraas cusub oo muddo dheer ah kusii joogo kooxdiisa.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa la filayay inuu ka tago Emirates Stadium dhamaadka xilli ciyaareedkan marka uu dhaco qandaraaskiisa haatan.
Manchester United iyo Inter Milan ayaa dhawaan lala xiriiriyay inay u dhaqaaqi karaan wakiilkiisa maadaama uu xor noqon doono , laakiin sida laga soo xigtay jariiradda The Sun, 28 jirkaan ayaa wajahaya dabeecad aan caadi aheyn madaama aysan jirin koox kale oo isku diyaarineysa inay mushahar ku qaadato mushaharkiisa.
Ozil ayaa la sheegay in uu weydiistay £ 330,000 todobaadkii, laakin la taliyeyaashiisa ayaa ku wargeliyay inuu doonayo inuu hoos u dhigo mushaarkiisa mushaharkiisa ama inuu iska sii joogo Arsenal uuna qaato £ 250,000 todobaadkii.